कृषिमा चार अर्ब बजेट कम - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home अर्थ कृषिमा चार अर्ब बजेट कम
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेका कृषि कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै आप्mनै मन्त्रालयका कार्यक्रम राखेर कृषि मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा राखेर हस्ताक्षर नै नभएका परियोजनाका नाममा ४ अर्ब बजेट छुट्याएर कृषि मन्त्रालयलाई ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको देखाइएको छ । कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अनावश्यक कृषि कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जानकारी दिए ।
सचिव भारीले एसोसिएसन अफ नेपाल एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टसले आयोजना गरेको कृषि बजेट २०७७÷७८ समीक्षात्मक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सो जानकारी दिएका हुन् । सचिव भारीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरी बजेट माग गरेको थियो । तर, हामीले माग गरेका कार्यक्रमअनुसार बजेट नै आएन । उल्टै अर्थमन्त्रीले आप्mनै मन्त्रालयको बजेट शीर्षकभित्र राखेर ४ अर्ब बजेटको कार्यक्रमलाई समावेश गरी कृषि मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेका छन् । जुन परियोजनासँग हस्ताक्षर नै भएको छैन ।’
उनले भने, ‘अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको भनेका थिए । तर रातो बुकमा मन्त्रालयलाई जम्मा ३७ अर्ब ४० करोड ३० लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । हामीले खोज्दै जाँदा विशेष व्यवस्थापन भनेर अर्थमन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय विशेष व्यवस्थापन भनेर उल्लेख गरेको पाइयो ।’
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि वित्तीय व्यवस्थापनमा रहने बजेटसमेत जोडेर अर्थले कृषिका नाममा बजेट बढी देखाएको छ । समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब छ्ट्याइएको छ । यो बजेट इफाडअन्तर्गतको सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि वल्ड बैंकअन्तर्गत सञ्चलान हुने कृषि कार्यक्रम परियोजनाको भएको सचिव भारीले बताए । उनले भने, ‘यो बजेट दातृृ निकायबाट आएर अर्थले हस्ताक्षर गरेपछि सो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय मातहतमै रहेर खर्च हुन्छ । जुन परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सो परियोजना आर्थिक वर्षमा सञ्चालन ल्याउन भनेर हस्ताक्षर नै भएको छैन ।’
सचिव भारीका अनुसार मन्त्रालयले माग गरेका एउटा कार्यक्रम ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याज दिइने कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम आएका छैन । रसायनिक मलका लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताव गरेकोमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब बजेट आएको छ । मन्त्रालयले प्रागारिक मलका लागि बजेट माग गरेको थियो । त्यसका लागि बजेट आएको छैन । यसैगरी, सहकारीमार्फत सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ३ अर्ब बजेट माग गरेको तर त्यसका लागि बजेट नै आएको छैन । उनले भने, ‘हामीले त्यो कृषि विकास बैंकमार्फत सहकार्य गरेर कृषकलाई सहुलियत दिने भनेर बजेट माग गरेका थियौं । यसैगरी १ अर्ब ५० करोड साना कृषि उद्यमी विकास कोष माग गरिएको थियो, त्यो पनि आएन ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कृषि उद्यमीको विकास गर्नेगरी खाद्य भण्डार र कृषि बजार केन्द्र र विदेशबाट फर्केर आएका र स्वदेशमा रहेका युवालाई १ अर्व ५० करोड बजेट माग गरेको थियो,’ सचिव भारीले भने, ‘कृषि मन्त्रीज्यूले कृषि प्राविधिक आवश्यक पर्छ भनेर हामीले कृषि प्राविधिकका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेटको प्रस्ताप गरेका थियौं । बजेट भाषणमा ५० करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । जुन बजेटले कृषकलाई कृषि प्राविधिकको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन ।’ कृषि क्षेत्रको विकास लागि कृषि प्राविधिकको अति आवश्यक पर्छ । आवश्यक प्राविधिक थप गर्न कृषिमा बजेटको नै नपुग्ने सचिव भारीको भनाइ छ । सचिव भारीले अहिलेको समय परिस्थितिअनुसार कृषि बजेट पप्र्यात नभएको बताए । उनले मन्त्रालयले माग गरेका कार्यक्रम बजेट विनियोजन नगरेर अर्थमन्त्रीले मनपरी पुरानै कृषि कार्यक्रम बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कोभिडका कारण थिचिएको अर्थतन्त्र उकास्न कृषिमा आशालाग्दो बजेट नआएको बताए । उनले भने, ‘बाहिरबाट आएका जनशक्ति, यहाँ बेरोजगार भएका जनशक्ति सबैको कार्यथलो भनेको खेतीपाती हो, बजेटले त्यसलाई समेटेको छैन ।’ प्रांगारिक मल र खेतीका लागि बजेट प्रयाप्त विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । अधिकारीले सीमाकृत किसान, साना किसानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।